कांग्रेस धादिङको सभापतिमा रामनाथ अधिकारी - Nari Batika online media khabar
१३ मंसिर २०७८, सोमबार ०५:२८ मा प्रकाशित ( २ महिना अघि) ८१ पाठक संख्या
धादिङ,१३ मंसिर ।
नेपाली कांग्रेस धादिङको जिल्ला सभापतिमा रामनाथ अधिकारी विजयी हुनुभएको छ । शनिबार भएको १४औं जिल्ला अधिवेशनबाट निकटतम प्रतिद्वन्दी भीमप्रसाद ढुंगानालाई ३६ मतले पछि पार्दै अधिकारी विजयी हुनुभएको हो । सभापतिका लागि देउवा पक्षका ढुंगाना र पौडेल पक्षका अधिकारीबीच मतदान भएको थियो ।
२१ सय ५६ मत खसेकोमा १ हजार ८२ रामनाथ अकिारी र १ हजार ४६ मत भिमप्रसाद ढुङ्गानाले प्राप्त गर्नुभएको हो । सभापतिसहित अन्य पदाधिकारी र सदस्यमा पनि अधिकांश रामनाथकै प्यानलका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । धादिङ क्षेत्र नं. २ बाट महासमिति सदस्यमा दिलमान पाख्रिनले सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
त्यसपछि क्रमश भीमप्रसाद ढुंगाना, रमेश धमला, रामनाथ अधिकारी र डा. राजाराम कार्की महासमिति सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । ३ जना यसअघि नै निर्विरोध भएका थिए । निर्वाचन समितिले भने घोषण गरिसकेको छैन ।